Slurry Pump, Slurry Pump Impeller, Shaft sleeve se - Winclan
I-Shijiazhuang Winclan Machinery Equipment Co., Ltd. Umkhiqizo wethu omkhulu ufaka iphampu ehlukahlukene. Amaphampu ethu asetshenziswa kakhulu ekuvikelweni kwemvelo, ezimayini, amalahle, izitshalo zamandla ezishisayo, uphethiloli, amakhemikhali, ukwelashwa kwendle, izinhlobo zamaphrojekthi wokonga amanzi, ukuchelela epulazini, ukwakhiwa, njll. Ngesikhathi esifanayo, nathi sibandakanyeka kuma-valve iziqalo nezingxenye zokupompa. Ngobubanzi obuhlukahlukene, ikhwalithi enhle, amanani entengo afanele nemiklamo yesitayela, imikhiqizo yethu isetshenziswa kakhulu kukaphethiloli, amakhemikhali, ezokwelapha nezinye izimboni.
Lokhu kusekelwe yithimba lobuchwepheshe eliqinile kanye nesakhiwo esibanzi sobunjiniyela nesakhiwo sokuklama.
Siyaziqhenya ngokunikeza isipiliyoni sokuthengwa esingenamthungo nethimba lokuthengisa elizinikele ekubekeni eceleni ukuqinisekisa ukuthi wonke amaklayenti athola insizakalo engcono kakhulu.
Isitifiketi sethu se-ISO 9001: 2008 siqinisekisa ukulethwa kuzidingo zamakhasimende ngaphandle kokukhetha.
I-YW Submersibel Indle Pump
YZ futha submersible